Ihabhu kuqala Russian lase-Arctic lakhiwa i international sezindiza Sabetta. It ikhona Awukude isiphetho homonymous e Yamalo-Nenets Autonomous District. Air ezokuthutha ihabhu kubaluleke lwamasu ukuthuthukiswa kwe-uwoyela negesi umkhakha esifundeni.
ekamu ensimini Sabetta etholakala eduze ngokushesha sezindiza. Air Harbor itholakala ogwini olusempumalanga yeNhlonhlo Yamal, eduze Gulf of OB, eziphathelene Sea Kara.
Ingqalasizinda Yamal Region
Yamal sifunda ngempela eziyinkimbinkimbi lujula futhi nokuthuthukiswa kwemithombo yezimbiwa. Lokhu kungenxa nje kuphela isimo sezulu elibuhlungu, kodwa nokwentuleka kwezingqalasizinda. Omunye main "Yamal LNG" iphrojekthi msebenzi ukuxazulula le nkinga.
Eliseduze emoyeni-zokuthutha ihabhu eduze nedolobhana Sabetta ngaphambili Bovanenkovo sezindiza. Lalivulwe ekupheleni 2012 futhi ngokuphelele okungewakho "Gazprom". Ngesikhathi elifanayo ukusuka zokuhlala kanye elise eliseduze sesitimela "Kara". Ngakho-ke, inkinga kwengqalasizinda yezokuthutha ilimala sebehlushwa ukuthuthukiswa kwe-Yuzhno-Tambeyskoye ensimini.
Sabetta Isikhumulo sezindiza (Yamal): ukwakhiwa
Ukwakhiwa emoyeni-zokuthutha ihabhu eduze Sabetta emzaneni sasisihlanganyela emikhulu "Yamal LNG". Le projekthi kuhilela ekwakhiweni kwengqalasizinda yezokuthutha yaseNingizimu Tambeyskoye zasendle, ezikhona enye yezindawo ezinkulu kakhulu kule Yamalo-Nenets Autonomous igesi yemvelo izinqolobane. Kukhona isitshalo esithela kuncibilike igesi yemvelo. Umsebenzi ku ekwakhiweni kwengqalasizinda yezokuthutha kwaqalwa ngo-2012, lapho bakhela Sabetta sezindiza. Ngawo lowo nyaka kwaqala umsebenzi wokwakha itheku. Imbobo yakhelwe uzulazule phakathi nawo wonke unyaka ngoba uMzila Wasolwandle OseNyakatho. Esikhathini esizayo, Russian ophihliza iqhwa imikhumbi uzobe etholakala lapha.
Operator Arctic "emoyeni amasango" iyinkampani elinganiselwe izikweletu zemali "International sezindiza Sabetta", okuyinto yena, ungumnikazi inkampani "Yamal LNG" is ukusebenzisa iphrojekthi ukuthuthukisa Yuzhno-Tambeyskoye ensimini. Phakathi bamasheya "Yamal LNG":
inkampani Independent Russian "Novatek" (ophethe 60% lamasheya).
uwoyela negesi inkampani French "Ubude" (20% kusengozini).
National Petroleum Corporation CNPC of China (20% kusengozini).
utshalomali Ubude ukuqaliswa project "Yamal CIS", ngokusho kombiko wokulungiselela, zaba cishe u- $ 27 bhiliyoni. Kuwo lo nyaka, ivolumu ukukhiqizwa igesi yemvelo safinyelela 30 bhiliyoni cubic metres. Negesi athunyelwa kwamanye amazwe ikakhulukazi esimweni liquid. ivolumu elilinganiselwe ezikhona izinto zokusetshenziswa kuyinto cubic metres yizigidi eziyizinkulungwane 492 kanye nezinye hydrocarbon uketshezi - kumathani ayizigidi ezingama-14.
Ukwakhiwa ihabhu Arctic yokusetshenziswa Kusolakala ubuchwepheshe obusha ukuze kwakhiwe izakhiwo ku eyiqhwa inhlabathi waphuzisa. Le phrojekthi ukwakhiwa kwebhilidi ezimbili storey eyinkimbinkimbi sezindiza yanyatheliswa ngo ngasekupheleni 2013 phezu ingosi inthanethi "Novatek". Ekuqaleni kuka-2014, inkampani "Yamal LNG" libike ukuthi, ngokusho kombiko wokulungiselela, ivolumu tekusisa ukwakhiwa air-ezokuthutha ihabhu kuyinto ruble ayizigidi ezingu-150.
Inxanxathela wokwakha abathintekayo amabili izigaba umsebenzi. Eyokuqala kuhlanganisiwe ukwakhiwa yesevisi umgibeli futhi esibulalayo, esisogwini indawo 36 × 42 amamitha. Eyesibili ngamazwe isakhiwo esibulalayo tiniketwa endaweni 36 × 36,5 m kunesakhiwo asinikezwayo. Ngenxa yalokho, bobabili esibulalayo kumele itholakale esigcawini 36 × 78,5 m. Ekuqaleni kuvulwa sezindiza lokuqala Arctic ihlelelwe Juni 2015.
Project airfield eziyinkimbinkimbi kuhlanganisa ukwakhiwa zezindiza, hangars ngoba izindiza. Ukwakhiwa evulekile eyaqedwa Disemba 2014.
Ngo-July 2015, ukuphathwa sezindiza sika lithole isitifiketi sokuhambisana imisebenzi sezindiza. Futhi eziyinkimbinkimbi airfield sasitholakala kuyi irejista isimo. Ngo-October 5, kulo nyaka, Interstate Aviation iKomiti ngokomthetho nokufaneleka sezindiza ukuthumela nokwamukela izindiza ngamazwe. A Dec 24 wavula iphuzu Ukunqamula emngceleni isimo.
Sabetta Isikhumulo sezindiza: Opening
Naphezu kweqiniso lokuthi kuvulwa ihabhu Kuye kwahlelwa-2015, ngendiza yokuqala wamukelwa ngonyaka 2014. 22 Disemba indiza yokuqala landizela niye emzaneni Sabetta. Abantu bangaleso sikhathi "737" umthuthi kazwelonke "UTair". Reis kwaba ogxile imvelo lobuchwepheshe. Ukwemukelwa izindiza kanye nezinsizakalo abagibeli izindiza waqala Februwari 2, 2015-th. Ukuze ngamazwe air travel sezindiza angavulwa 29 Julayi ngawo lowo nyaka. Isizathu kwaba oda uhulumeni waseRussia, kanye ukufakwa umgibeli kanye wezimpahla bewela umngcele isimo. Uhambo lokuqala luzoba ngamazwe senzeka ngobusuku Mashi 4, 2016, lapho kwenziwa emzileni "Beijing - Sabetta - eMoscow". Kwafika indiza kusukela enhlokodolobha Chinese ayiswe Sabetta (Yamal wesifunda) abagibeli abane, bese ethunyelwe eMoscow.
Sabetta Airport has a evulekile sasakhiwe ngokhonkolo, okuyinto imithetho ngokugcwele ne esigabeni sokuqala ICAO. Usayizi band kukhona 2704 m eside futhi 46 m ububanzi.
izinhlobo ezamukelekayo izindiza
Ihabhu Arctic bangathola futhi uthumele lezi zinhlobo ezilandelayo izindiza:
Libuye chweba indiza isuka noma isisindo kuqhubeke zonke izinhlobo ezinophephela emhlane.
Okwamanje Sabetta sezindiza loniketela shift umgibeli njalo izindiza eziqhutshwa izinkampani zasekhaya "UTair" futhi "Yamal".
"UTair" izimpukane kusukela Sabetta eMoscow (Vnukovo Airport), New Urengoy futhi Samara. Inkampani yenethiwekhi "Yamal 'uyifeza izindiza eziya eMoscow (Domodedovo sezindiza) kanye Novy Urengoy.
Ngakho, sezindiza i-arctic Sabetta ine eziqakathekileko ezibalulekile kazwelonke. Yakhiwa kohlaka iphrojekthi "Yamal LNG", eklanyelwe ukuthuthukisa ingqalasizinda yezokuthutha yaseNingizimu Tambeyskoye igesi yemvelo Amasimu. Ukwakhiwa ihabhu waqala kusuka ekuqaleni e 2012 futhi yaqedwa ekupheleni 2014. V. Putin kuqashelwe ukuthi le phrojekthi usekelwa izimali ezimele kanye nekahulumeni. CEO of the inkampani yezindiza "UTair" A. Martirosov ukholelwa ukuthi kuvulwa sezindiza kuzokhuphula izinga zokuthutha ukufinyeleleka yeNhlonhlo Yamal ngiyiphe negalelo ekuthuthukiseni enyakatho-ntshonalanga yeSiberia. Sabetta emzaneni uye empeleni abe ezinkulu zamazwe ngamazwe air zokuthutha ihabhu e-Yamalo-Nenets Autonomous District.
Dushanbe Isikhumulo sezindiza: Ukufingqa
Yini odinga ukukwazi mayelana indiza eMoscow - Hurghada?
Ezingaphansi ka "Aeroflot": Ulwazi Basic
Wamavukelambuso-Cuban Raul Castro: Biography, izithombe
Apreli 15 - Day yolwazi semvelo. umlando iholide
Izimbali Crocheted - umhlobiso sokuqala ngezandla zakhe
Umuthi 'Doppelgerts Magnesium + Calcium ": izici isicelo